नायिका सुहानाको छातीमा सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बर, जथाभावी फोन आएर हैरान ! – kalikadainik.com
नायिका सुहानाको छातीमा सर्वसाधारणको मोबाइल नम्बर, जथाभावी फोन आएर हैरान !
बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६ | १५:३५:४३ |
काठमाडौं – चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३ को ट्रेलरमा नायिका सुहाना थापाको छातीमा रातो रंगमा एउटा मोबाइल नम्बर लेखिएको छ – ९८४१००८…मोबाइल नम्बर सँगै अंग्रेजीमा ‘लव यू आर्या ! प्रेम’ पनि लेखिएको छ । चलचित्रमा लेखिएको नम्बरका कारण काभ्रेका वीरध्वज तामाङ तनावमा छन् । नायिकाले छातीमा लेखेको नम्बर तामाङको रहेछ । चलचित्रमार्फत् मोबाइल नम्बर प्रचारप्रसार भएपछि उनी अहिले तनावमा छन् ।
सामान्य जीवनयापन गरिरहेका तामाङ कामको सिलसिलामा कहिले काभ्रे त कहिले काठमाडौं गरिरहन्छन् । बिहीवार लोकान्तरसँग आफ्नो गुनासो राख्दै तामाङले नायिकाको छातीमा आफ्नो नम्बर लेखिएकाले आफू तनावमा रहेको बताए । बिहान, दिउँसो र मध्यरातमा समेत उनलाई फोन आउने गरेको छ । ‘कतिपयले मात्तिदै फोन गर्ने गरेका छन्, यसले मेरो पारिवारिक जीवनमै असर गरेको छ,’ तामाङले भने, ‘मेरो नम्बर हिरोइनको छातीमा भएकै कारणले मलाई धेरै तनाव दिएको छ ।’
एक रात तामाङ खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थिए । अपरिचित नम्बरबाट फोन आएछ । फोन उनको पत्नीले उठाइन् । हेल्लो भन्नासाथ उताबाट अपाच्य शब्दहरू प्रयोग भए । उनकी पत्नीले केही सोच्नै सकिनन् ।
तामाङ पत्नीले गलत नम्बरबाट फोन आयो होला भन्ने सोचिन् । तर फोन गर्ने मान्छेले यही नम्बरमा गरेको हो भनेपछि उनले तामाङलाई बोलाइन् । उताबाट मात्तिएको स्वरमा बारम्बार अपाच्य शब्द सुनेपछि फोन काटेर दुवै हैरान भए । ‘मैले मेरो पत्नीलाई सम्झाएँ,’ तामाङले भने ।
‘म वैदेशिक रोजगारमा गएको बेलामा सन् २००८ तिर हो कि त्यतिबेला सीम लिन मरिहत्ते गर्नुपर्थ्यो । मैले भान्जीलाई मेरो लागि एउटा सीम लिइदेउ भनेको थिएँ । अहिलेसम्म उनकै नामको सीम चलाइरहेको छु,’ उनले भने ।
कानूनी कारवाहीका लागि आफूले केही नजानेको तामाङ बताउँछन् । ‘कहाँ गएर के गरूँ ? मलाई केही थाहा छैन,’ तामाङले गुनासो गरे, ‘ममाथि परेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ चलचित्र निर्माण समूहको असावधानीले सर्वसाधारणको नम्बर प्रचारप्रसार हुँदा तनाव खेप्नुपरेको छ ।
चलचित्र ए मेरो हजुर ३ का टीमलाई आफूले भेट्न चाहेको तामाङले बताए । ‘एक पटक उनीहरूलाई भेट्न म कुमारी हलमा पनि पुगेको थिएँ,’ तामाङले भने, ‘मैले आफ्नो कुरा राख्न खोजें तर उनीहरूले वास्ता गरेनन् ।’
इन्टरनेटको खासै प्रयोग नगर्ने तामाङले आफ्नो फेसबूक एकाउन्ट त भएको तर नचलाएको बताए । उनले चलचित्रमा विना स्वीकृति आफ्नो नम्बर प्रयोग भएको रहेछ भनेर साथीबाट थाहा पाएका थिए । फिल्म हेर्दा नायिकाको छातीमा आफ्नो नम्बर देखेर चकित बनेको उनले बताए ।
यस विषयमा चलचित्र निर्माण समूहसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।